Golaha Shacabka: Waa been wararka ku saabsan xil ka qaadista Rooble
Golaha Shacabka Soomaaliya ayaa been abuur ku tilmaamay warar sheegaya in kulanka Sabtida uu yeelanayo Golaha la doonayo in xilka looga qaado ra’iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Rooble.
Qoraal uu soo saaray guddoonka Golaha ayaa lagu yiri “Xafiiska Guddoomiyaha Golaha Shacabku,Waxuu dhamaan Xildhibaanada, Xukuumadda iyo Dadweynaha lala Socodsiinayaa maalinta Sabtiga 1da May, in Madaxweynaha JFS uu hor imaanayo Golaha Shacabka uuna codsanayo in Goluhu ansaxiyo heshiiska dib-loogu noqanayo hirgalinta iyo fulinta Heshiiskii Doorashada ee 17 September 2020 si dalku u doorasho degdeg u galo.”
“Waxaa magaalada la soo galiyey warar lagu been Abuuranayo Golaha Shacabka oo sheegaya in Golaha Shacabku damacsanyahay in R/Wasaare Rooble Xil ka Qaadis lagu samayo taas oo ah War been abuur ah. Xiligan adage ee dalku juro, waa in Shacabka iyo Dawladda isla shaqeeyaan si ay u ilaashadaan dagnaashaha iyo horumarka dalkooda.”
Wararka ku saabsan xil ka qaadista Rooble ayaa aad u qabsaday baraha bulshada saacidhii dambe ee maanta. Sanator Cabdi Qeybdiid oo wareysi siiyey VOA ayaa ka digay isku day kasta oo xilka looga qaaday Rooble.